Global Voices teny Malagasy · 16 Febroary 2011
16 Febroary 2011
Tantara tamin'ny 16 Febroary 2011
Bahrain: Ny Andron'ny Hatezerana
Tamin'ny toerana maro no nahitàna hetsika tany Bahrain androany, tao anatin'ilay nantsoina hoe Andron'ny Hatezerana teto Bahrain. Taitran'ireo zava-doza ny mponin'ny aterineto rehefa nahita ny fomba feno habibiana nataon'ny polisy nanoloana ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana hatramin'ny maraina vao niposaka, ary nalaky tokoa ny fifanakalozana rohy mankany amin'ny Twitter sy ireo...
Inona no zavatra hiseho any Ejipta amin''ny 25 Janoary? Mangataka hetsika sy fitorevahana etsy sy eroa ny vahoaka. Iza no handray anjara, ary aiza? Inona no angatahan'izy ireo? Mety hoe misy olona sasany manohitra ny zavatra rehetra? Mila mitsidika kely ny tontolon'ny bilaogy Ejiptiana fotsiny isika dia mahita valiny amin'ny...
Ejipta: Ilay lehilahy ao an-damosin'i Omar Suleiman
Na dia ny revolisiona aza tsy nahasakana ny fahaiza-mampihomehy Ejiptiana. Amin'izao fotoana izao, efa malaza toa ny Kianja Tahrir ilay lehilahy mijoro aorian'ny filoha lefitra Omar Suleiman.
Ejipta: Wael Ghonim navotsotra?
Fanampim-baovao:Naheno tsaho maro mifanohitra izahay momba ity tantara ity any an-toerana ary miandry porofo bebe kokoa manamarina fa navotsotra i Ghonim. Navotsotra androany i Wael Ghonim, mafana fo Ejiptiana amin'ny aterineto sady mpiasan'ny Google, noho ireo Ejiptiana mbola manohy mangataka ny fifaranan'ny fitondràn'i Mubarak. Notendren'ireo mpitolona ao amin'ny Kianja Tahrir...
Tovolahy iray hafa indray, Fadhel Al Matrook, no maty io maraina io raha notafihan'ny polisy ny filaharan'ny olona handeha handevina tovolahy iray hafa, Ali Mushaima, maty omaly tamin'ny hetsiky ny 'Andron'ny Hatezerana' tao Bahrain.